Pelvic Floor Muscle Training for Women in Somali | Continence Foundation of Australia
Pelvic Floor Muscle Training for Women in Somali
Tababarka Loogu Talagalay Du Marka Ee Muruqyada Sagxada Misigta
Waa maxay muruqyada sagxada misigtu?
Sagxada miskaha waxay ka sameysan tahay muruqa iyo unugyada kale. Laalaabkan wuxuu u fidaa sida wax laadlaada laga bilaabo dabagebinta xagga danbe, ilaa lafta gumaarka ee xagga hore.
Muruqyada sagxada misigta ee dumarka waxay taageertaa kaadiheysteeda, ilmogaleenka (uterus) iyo caloosha (mindhicirka). Tuunbada kaadida (marinka hore), ferjiga iyo marinka danbe dhammaan waxay maraan muruqyada sagxada miskaha. Muruqyada sagxada misiqta ayaa caawinaya inaad kontoroosho caloosha iyo kaadiheysta. Waxay sidii kale caawiyaan shaqada galmada. Waa muhiim inaad muruqyada sagxada miskahaagu ay xooggan yihiin.
Waa maxay sababta aan u sameynayo tababarka muruqa sagxada miskaha?
Dumarka da’a kasta waxay u baahan yihiin muruqyada sagxada lafaha miskaha oo xooggan.
Muruqyada sagxada lafaha miskaha waxaa lagu daciifin karaa iyadoo:
aan laga dhigin kuwo firfircoon;
aad uur yeelato carruurna aad dhasho;
caloosha oo ku fadhida;
miisaankaagu uu bato;
aad culeys qaado;
qufaca socda ilaa wakhti dheer (sida qufaca qofka sigaarka cabba, burinkiitada ama neef); iyo
Dumarka qaba cadaadiska ceshad la’aanta kaadida iyo saxarada – taas waxaan ula jeedaa, dumarka isqooya markay qufacaan, hindhisaan ama ay firfircoon yihiin – waxay ka heli doonaan tababarka muruqyada sagxada lafaha miskaha inay ka caawin karaan xalinta dhibkaan.
Dumarka uurka leh, tababarka muruqyada sagxada lafaha miskaha waxay ka caawin doonaan jirka inuu la qabsado miisaanka koraya ee ilmaha, muruqyada dhisan ee caafimaadka qaba ka hor intuusan ilmaha yari dhalan ayaa u kabmaya si sahala dhalmada ka dib.
Ilmahaaga dhalashadiisa ka dib, waa inaad bilowdaa tababarka muruqyada sagxada miskaha sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodo. Had iyo jeer iskuday “taageer” muruqyada sagxada miskahaaga (kor isugu ururi oo kor u qabo) wakhti kasta ka hor intaadan qufucin, hindhisin ama ilmo qaadin. Tan waxaa loogu yeeraa “awood u yeelasho”.
Isla markay dumarku gaboobaan, muruqyada sagxada miskuhu waxay u baahan yihiin inay xoog yeeshaan sababtoo ah hormoonka ayaa isbedelaya ka dibna ma dhaleysnimada ayaa waxyeelaysa kontoroolka kaadiheysta. Sidoo kale, muruqyada sagxada miskaha ayaa isbedelaya waxaana laga yaabaa inay daciifto. Qorshaha tababarka muruqyada sagxada miskaha ayaa ka caawin karta inay yareyso saameynta dhalmodeynta taageerada miskaha iyo kontoroolka kaadiheysta.
Tababarka muruqyada sagxada miskaha waxaa sidoo kale laga yaabaa inay caawiyaan dumarka sida degdega ah ugu baahan inay u kaadshaan badanaa (oo la yiraahdo ceshad la’aanta kaadida iyo saxarada degdega ah).
Meeye muruqyadeyda sagxada miskuhu?
Waxa ugu horeeya ee ah in la sameeyaa waxaa weeye inaad ogaatid muruqyadaad u baahan tahay inaad tababarto.
Fadhiiso ama jiifso iyadoo muruqyada bowdyahaaga, barida iyo caloosha ay debecsan yihiin.
Isku ururi muruqyada ku wareegsan marinka danbe sidii aad isku deyeyso inaad joojiso dhuuso kaa imaneysa. Hadda debci muruqan. Isku ururi ka dibna siidaa laba jeer ilaa aad ka hubto inaad heshay muruqyadii saxda ahaa. Iskuday in aadan isu ururin dabadaada.
Markaad fadhido musqusha si aad u faaruqiso kaadiheystaada, iskudey inaad joojiso socodka kaadida, kadibna mar labaad bilow. Sidaan same si aad u baratid muruqyada saxda ah ee aad isticmaaleysid – laakiinse hal mar toddobaadkii oo kaliya. Waxaa laga yaabaa inay kaadiheystaadu aysan u faaruqin sidii la rabay haddii aad joojisid oo aad bilowdid socodka si ka badan sidaas.
Haddii aadan dareemeynin inay kuu cadahay “isu ururi oo kor u qaad” muruqyada sagxadaada miskaha, ama haddii aadan gaabin karin socodka kaadidaada sidii looga hadlay Qodobka 3aad, dhakhtarkaaga caawimaad weydiiso, fiisiyoteriba, ama kalkaalisada ceshadka kaadida iyo saxarada. Waxay kaa caawin doonaan sidii ay si sax ah kuugu shaqeyn lahaayeen muruqyada sagxada miskahaagu.
Dumarka leh muruqyada sagxada miskaha oo daciifa ayaa ka faa’iidi kara tababarka muruqyada sagxada miskaha.
Sidee baan u sameeyaa tababarka muruqyada sagxada miskaha?
Hadda maadaama aad dareemeyso inay muruqyadu shaqeynayaan, waxaad awoodaa:
Isu ururi oo soo jiid muruqyada ku hareeraysan marinkaaga danbe iyo ferjigaaga isku mar. KOR uga qaad gudaha. Waa inaad yeelataa dareen ah “qaadis” wakhti kasta oo aad isu ururiso muruqyada sagxada miskahaaga. Iskudey inaad u qabato si xooggan oo dhuujisan ilaa intaad ka tirinayso 8. Hadda, siidaa oo nasano. Waa inaad leedahay dareen cad oo ah “siideyn”.
Ku celi “isu ururi oo kor u qaad” siidaana. Waxaa wanaagsan inaad nasato ilaa 8 ilbiriqsi qiyaastii inta u dhaxeysa markasta oo aad muruqyada kor u qaadid. Haddii aadan heyn Karin ilaa 8, hay ilaa inta ugu badan ee aad awoodid.
Tan ku celi “isu ururi oo kor u qaad” ilaa inta ugu badan ee aad awoodid, ilaa xad dhan 8 ilaa 12 isu ururinood.
Iskuday inaad sameyso siyaalahan ah 8 ilaa 12 isu ururinood kiiba, iyadoo nasasho u dhaxeyso.
Samee qorshahan tababarka oo dhan (saddexdood oo ah 8 ilaa 12 isu ururinood) maalin kasta adoo jiifa, fadhiya ama taagan.
Markaad sameynaysid tababarka muruqyada sagxada miskaha:
neefsashada sii wad;
isu ururi oo kor u qaad oo kaliya;
HA dhuujin baridaada; kana
dhig bowdyahaaga kuwo debecsan.
U samee tababarkaaga muruqyada sagxada miskaha si wanaagsan
Isu ururin wanaagsan oo yar ayaa ka fiican kuwo aan fiicneyn! Haddii aadan hubin inaad u sameynaysid isu ururinta si sax ah, ama haddii aadan ku arkin wax isbedel ah astaamaha 3 bilood ka dib, caawimaad weydiiso dhakhtarkaaga, dabiici-ku-dawayn, ama kalkaalisada ceshadka kaadida iyo saxarada.
Ka dhig tababarkaaga qayb ka mid ah nolol maalmeedkaaga ka mid ah
Mar haddii aad baratid sidaad u sameyn lahayd isu ururinta muruqyada sagxada miskaha, waa inaad badanaa sameysaa. Maalin kasta ayaa ugu fiican. Waa inaad siisaa isu ururin kasta dareenkaaga oo dhan. Samee wakhti joogta ah oo aad sameyso isu ururinta muruqyadaada sagxada miskaha. Tan waxaa laga yaabaa inay noqoto ka dib markaad musqusha qasho, markaad biyo cabbeysid, ama markaad sariirta jiiftid
Waxyaalaha kale ee aad sameyn kartid si aad u caawisid muruqyada sagxada miskahaaga:
Isticmaal “awooda” – taasi waa had iyo jeer isku day “taageerid” muruqyada sagxada miskahaaga (adoo isu ururinaya kor oo qabanaya) wakhti kasta ka hor intaadan qufucin, hindhisin ama aadan waxba qaadin.
La wadaag dad kale qaadida xamuulka culus.
Cun furut iyo khudaar cabna 1.5 – 2 litir oo cabitaana ah maalintii.
Ha caddaadin markaad isticmaalaysid calooshaada.
Weydii dhakhtarkaaga waxyaalaha ku saabsan sanboorka, neefta iyo burunkiitada si ay u debciso hindhisada iyo qufaca.
Ku hey miisaankaaga ilaa xadka saxda ah ee da’daada iyo dherarkaaga.